Die Ivoti, aluminium Sand Ivoti, Precision Cnc Machining - Innovaw
Ningbo INNOVAW ZEKHEMIKHALI CO., LTD i umenzi ngobuchule umtyhido kunye inxalenye ngomshini nesetyenziswa ngokubanzi Automotive, Medical, earthmover, petroleum, umbane kunye noShishino izibane. Ukunikezela kushishino lwexesha elide kunye nabaxumi ukusuka North America nasentshona eYurophu amazwe, thina siyazi kakuhle ukuba yintoni imfuno umxhasi xa bebonelela imizobo kunye nezinto omiselweyo. Kwaye engineering zethu zibonisa inkqubo ilungileyo neteknoloji ukuze enze icandelo okanye naluphi na uyilo ukutshintsha xa kuyimfuneko. Uninzi iimveliso zethu lithunyelwa eKhanada, eUnited States, nasentshonalanga Yuruphu Germany, France, Italy, Norway, Finland, Switzerland, njl ubufumane igama elihle phakathi abaxumi bethu.
Ningbo INNOVAW die ngodongwe osikhokelayo kwihlabathi ngqo die ekubunjweni zinc, aluminiyam nezinki aluminium. izifundo View icala evela mveliso ezahlukeneyo izimvo ecandelo uphuculo nge kokugxeka kufa.
thina TS16949 kunye ISO14001 eqinisekisiweyo.
umenzi oqeqeshiwe of tooling kufa eyahlulayo, uxinzelelo oluphezulu kufa eyahlulayo, aluminiyam gravity eyahlulayo, ephantsi koxinzelelo kufa eyahlulayo, ngqo CNC machining phantse-20 iminyaka.